I-Anti-corrosion Roots Blower, i-China Anti-corrosion Roots Blower abavelisi, abaxhasi, iFektri -NANTONG RONGHENG
Ikhaya>iimveliso>Iingcambu Blower / Vacuum Pump>Ingcambu Anti-umhlwa Blower
AC series anti-umhlwa Iingcambu blower ubukhulu becala kusetyenziswa amayeza, ishishini imichiza, unyango inkunkuma kunye namanye amashishini, kwaye yenzelwe iimpawu amashishini ezifanayo kunye eendaba ezininzi ezonakalisayo kunye namacandelo eendaba entsonkothileyo.
AC uthotho anti-umhlwa iingcambu blower ikakhulu isebenzisa amanyathelo anti-umhlwa ukuba inxalenye overcurrent, kwaye ngokuguqukayo yamkela izinto ezahlukeneyo anti-umhlwa kunye neefom ezifana passivation komhlaba, nickel nesingxobo, zinc nesingxobo, titanium nesingxobo, kunye Teflon nesingxobo ukuphucula bhetyebhetye imveliso kunye nobomi benkonzo kuwo wonke umatshini. Ngokuya ngokukodwa ukuthuthwa kwegesi, iintlobo ezahlukeneyo zeebheringi, iisilencers, imfutho yentsimbi engenasici kunye nezinye izinto ezinokuqwalaselwa ukuze zihlangabezane neemfuno ezahlukeneyo zabathengi. Anti-umhlwa blower ikakhulu yahlulwe izinto anti-umhlwa kunye ukutyabeka anti-umhlwa:
Phakathi kwabo, iindleko zokulwa ne-corrosion yezinto ziphezulu kakhulu. Ukongeza ekusetyenzisweni kwezinto zokulwa umhlwa njengensimbi engenasici kwindawo engaphezulu ngoku, iikheji kunye nokutywinwa kweebheringi ezihambelanayo nazo kufuneka zikhethwe ngokweendaba ezahlukeneyo.
Ukwaleka i-anti-corrosion kulula kwaye kulula ukuyenza, kwaye ukusebenza kweendleko kuphezulu. Umgaqo-siseko kukwakha ubume obuninzi benguqu yotshintsho phakathi kwento yokuthambisa kunye nezinto ezisisiseko, ukuze iipropathi zayo ezipheleleyo ze-thermodynamic zihambelane ne-substrate, kwaye ukutyabeka kusetyenziselwa ukwahlula iigesi ezonakalisayo kunye neemveliso kumhlwa.
● Iprofayili yokunyanzeliswa: iprofayile ekhethekileyo ye-CON-blade CONCH, ukuhamba kancinci komoya, ukusebenza okuphezulu kwevolumu, ukusebenza kakuhle, ukonga umbane, ingxolo ephantsi kunye nokushukuma okuncinci;
● Ukungena kunye nokuPhuma: Ubume obukhethekileyo obunjengedayimane, ukungena komoya okugudileyo;
● Ukupholisa: umoya opholileyo kunye nopholileyo ngamanzi, unokutshintshwa ngokufanelekileyo
● Izinto eziphathekayo: Izinto ezikhethekileyo zokulwa ne-corrosion, i-titanium plating, insimbi engenasici, iTeflon;
● Ubume bomzimba: ubume bendabuko, uhlobo oluxineneyo
Umgangatho wokuhamba: 0.6 ～ 713.8m³ / min;
Temperature Ukupholisa ubushushu ngokutshintsha kobushushu: 90 ℃ (ngokuhambelana noxinzelelo lwe-58.8kPa);
Qaphela: Naziphi na iimeko ezintsonkothileyo zokusebenza ezibandakanya ukusebenza kwe-high-altitude, ukusebenza kwe-frequency frequency, ukuthuthwa kwegesi ephantsi (i-helium), njl.